Dilaaga Caruurta – Hutchinson Gifford Progeria – Kaasho Maanka
Qalad ku yimaada hal hidda-side, LMNA, ayaa horseeda isbadal aanan caadi ahayn oo ku yimaada barootiinka lamin A, kaas oo waxyeeleeya dahaarka bu’da unugga kolkaasna sababa in unuggu si deg deg ah u dhinto asaga oo aanan qaangaarin. Intaas oo kali ah kuma eka e, cilladani waxa ay si tartiib ah oo xanuun badan u dishaa ilmaha ayada oo ku keenaysa gabow deg deg ah oo xawaare sare ku socda. Cilladani waxaa markii u horeysay ogaaday Jonathan Hutchinson, sanadkii 1886, asaga ayaana loogu magac daray.
Goorta uu ilmuhu gaaro da’da 8aad, waxa uu la daalaa dhacaa dhammaan cudurada lafa xanuunka, wadna xanuunka, ilkaha iyo timaha oo ka daata iyo dhammaan dhibaatooyinka la xiriira gabowga. Ilmaha ku dhasha cilladani ma dhaafo da’da qaangaarka (baaluqa). Cilladani waa mid loo dhinto 100% oo aanan laga kicin, wax daawo ahna loo hayn.
Cillad noocani oo kale ah ee u gaarka ah dhallaanka waa mid laba hab uun loo macnayn karo oo kala; kow, in uu Allaah si ku talagal ah ugu diyaariyay caruurta qaarkood in ay xanuunkaan maraan oo ay da’ hore ku dhintaan ayaga oo imaanshahooda dunida aysan wax macna ah lahayn, sidaas daraadeedna xanuunkan iyo hoogaan yahay qorshe Alle. Labo, in Allaah uusan wax shaqo iyo shuqul ah ku lahayn arintan iyo waxa ka dhacaya hidda-sideyaasha dhexdooda sida uusan shuqul iyo shaqo toona ugu lahayn in biyuhu u dareeraan dhanka godan ee dhulka. Mida dambe ayaa ah middii ay qabeen falaasifo badan sida Ibnu Siinaa, Ibnu Rushdi iyo Faaraabi kolkii ay lahaayeen; “Allaah garan maayo molikiyuullada”
QORMO LA XIRIIRTA: Cuf-isjiidadka iyo Carshiga!
Sawirka sare waa ilmo la il-daran xanuunka Hutchinson. Inkastoo uu u muuqdo waayeel, haddana waa ilmo ku jira da’da 10 jirka.
Ilaahay markuu go’aansaday inuu dhulka abuuro iyo waxa ku noolaan doona wuxuu qoray waxaksta oo ku dhici lahaa ama ay ku kici lahaayeen iyo meeshay ku danbayn lahaayeen abuurtiisaasi, ujeedka hadalkani waxa weeye ilaahay wuxuu go’aan kasii gaadhey waxkasta oo dhici lahaa ama ay tahay inay dhacaan mustaqbalka oo aanay ogeyn cid aan isaga ahayni. Diinta islaamku waxay inoo sheegeysaa inay waajib ku...
W/Q: Gallad Gurxan 21st September 2019
Fahan xumada culimada Islaamka